Xiisado dagaal iyo dagaalo maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Gedo – SBC
Xiisado dagaal iyo dagaalo maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Gedo
Posted by Webmaster on October 30, 2011 Comments
Xiisado dagaal iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo sheegayaa qeybo ka tirsan Gobolka Gedo gaar ahaan inta u dhaxeysa Degmada Baardheere iyo weliba Degmada Buusaar ee gobolkaas ka dib markii ay maanta halkaasi galeen ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo isgarabsanaya.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada xoogaga xarakada Alshabaab ay halkaasi isaga bexeen balse aysan ka fogeen kuna suganyihiin goob aan sidaasi uga fogeen deegaankaasi iyadonona laga baqanayo dagaalo markale halkaasi ka dhaca.
Dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi iyo hareerihiisa ayaa cabsi xoogan ka muujiyay xisiadahan iyagoona sheegay in labada dhinac ee dagaalamaya ay isu jiraan in ka yar 3Km,
Maalmihii ugu dambeysay ayaa deegaanadaasi waxaa ka taagnaa xiisadaha dagaal iyo isku abaabulka ciidamada iyadoona ay mararka qaar isweydaarsanayeen madaafiic sida ay saxaafada u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka .
Qaarkod dadka ayaa horay barakac u sameeyay halka inkalena ay iminka sameynayaan Barakaca maadaama laga cabsi qabo saacadaha soosocda oo uu dagaal dhexmaro labada dhinac ee isgarabsanaya waa DKMG ah iyo Ciidamada Kenya iyo xarakada Alshabaab.
aaminayusuf osman says:
ugu horayn waxan salaamayaa dhaaman dad waynaha meel kasta oo ay jogaan waxan ku salamamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum